Ogaden News Agency (ONA) – Faalo: Jabka Cadawga iyo Jaaniska Shacabka! By: Gumaysidiid
Faalo: Jabka Cadawga iyo Jaaniska Shacabka! By: Gumaysidiid
Posted by ONA Admin	/ November 25, 2015
Wadanka Ogaadeeniya oo ah meel colaadeed ayaa kolba marxalad horleh gala wuxuuna xiligan xaaliga ah kujiraa marxalad hor leh. Loolanka ka dhaxeeya xornimo doonka Ogaadeeniya iyo dal balaadhsiga Gumaysiga Ethiopia ayaa saameeya siyaasada, dhaqaalaha iyo nolasha guud ahaanba shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika
Ethiopia oo ladaalaadhacaysa siyaasad xumo, dhaqaale la,aan iyo dagaal gudaha kaga shidan ayaa kolla ciirsii bidaysa wadamada reer Bariga sida Shiinaha kolla kudhacaysa reer galbeedka sida Maraykanka. Waxayna sheegeen in ay badalayaan xukunka militari isla markaana ay dabakhi doonaan habka dimuqraadiga ah ee uyala wadamada reer galbeedka taasoo ku noqotay xukuumada tabarta yar wax lamafilaan ah.
Gudaha Ethiopia waxaa kajira nidaam la,aan iyo kala shaki waxaana beeray horjoogaha maqaarsaarka ah oon lahayn wax awood ah iyo danbiilyaashii oo doonaya ineey ku gabadaan gidaarkii dumay. Xukuumada maqaarsaarka ah oo ku guul daraysatay dhisida haykal dawladeed ayaa maamuli wayday xaafiiska madaxtooyada.
Midka mida shaqsiyaadka u dhuul duleela been hawaasnimada Ethiopia ayaa ii xaqiijiyay in aysan jirin rajo laga qabo in la sameeyo dawlada cagaheeda isku taagta balse waxa su-aal ah buuyidhi lama garanayo mudada ay kujiri doonto nidaamkan mututuusha ah.
Xogaha laga helayo gudaha xaafiiska Haile ayaa sheegaya in fariimo kasoo gaadhay dibada sida siyaasiyiin ku xeldheer xaalda Geeska Afriaka taasoo laga cosaday in uusan wax talaabo ah qaadin inta xal looga helayo hanka beenta ah ee horsocda xubnaha dhiiga shacabka iyo dhaqaalihiiba cunay ee Tigreega ah kuwaasoo sabab u ah curyaaminta iyo ciirsi la,aanta kucusub Ethiopia.
Hadaba fursada balaadhan ee hortaala Xornimo doonka ayaa maanta u istaagtay ineey ka faa-iidaystaan dhamaan mucaaradku waxayna dhawaan mucaarad isku gacan saareen wadanka dibadiisa si ay u burburiyaan kuwii shalay heshiiska ku ahaa cabbida dhiiga shcabka oo maanta is cunaya.
Doorka & Saamaynta Ogaadeeniya: kooxda maqaarsaarka ah ee uu horjoogo qalbi caruur (cabdi-ilay) uyahay ayaa rajo dhigay kadib markii ay waayeen awaamirtii kaga imaanaysay kor ee ahayd ineey shacabka ciqaab iyo gumaad u gaystaan kadib markii ay boqolaal ogaadeniya u dhalatay xabsi iyo xabad ku laayeen.
Axmaaro & Dameeruhu Ooda U Xigtay Cunaan: Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya iyo Shacabka Gude iyo dibadba waxay soo gaadheen xiligii ay meel marin la haayeen sharaftooda iyo karaamadooda waana maalintii ay luntay awoodii hortaagnayd Xoriyada Ogaadeeniya.
Midnimo MIntid Iskutashi Allahu Akbar